SM-A205F/DS | SM-A205FZKGMYM | MYANMAR MM
မျက်နှာပြင် ကြီးမားလေ၊မြင်ကွင်းပိုကျယ်လေ ရိုးရှင်းပြီး စမတ်ကျစေမဲ့ဒီဇိုင်းကိုယ်ထည် မှတ်တမ်းတင်ရမဲ့ အမှတ်တရတွေ အတွက် Dual cameras
၆.၄လက်မရှိတဲ့ HD+ sAMOLED မြင်ကွင်းကျယ် မျက်နှာပြင်ကြောင့် ကြည့်ရှုရတာ သင်ကြိုက်နှစ်သက်စေမှာ သေချာပါတယ်။ Galaxy A20ရဲ့ Infinity-V Display ကသင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပြောင်းလဲပေးစေမဲ့အပြင် V-cut မျက်နှာပြင်ကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ မြင်ကွင်းကျယ် အတွေ့အကြုံတွေ ဘယ်လောက်ထိခံစားနိုင်မလဲ ဆိုတာ သိရှိနိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Galaxy A20 ရဲ့ 7.8mm သာရှိတဲ့ သေးသွယ်ကျစ်လျစ်တဲ့ ကိုယ်ထည်ဟာ သင့်ရဲ့လက်နဲ့တသားတည်း ကျနေမှာပါ။ တောက်ပပြီး ကြွေရောင်ထနေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Plastic ကိုယ်ထည်ရှိပြီးတော့ အနက်ရောင်၊ အပြာရင့်ရောင်နဲ့ အနီရောင်လေးတွေကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ လော့ခ်ဖြည်ဖို့အတွက်ဆိုရင် Scanner ပေါ်မှာ လက်ချောင်းလေးတင်လိုက်ရုံပါပဲ။
မှတ်တမ်းတင်ရမဲ့ အမှတ်တရတွေ အတွက် ကင်မရာနှစ်လုံး
လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကင်မရာနှစ်လုံးက ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကို တစ်ချက်ထိလိုက်ရုံနဲ့ တောက်ပပြတ်သားတဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 13MP ရှိတဲ့ ကင်မရာတစ်လုံးရယ် 123 ဒီဂရီအထိရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ 5MP ရှိတဲ့ မြင်ကွင်းကျယ်ကင်မရာရယ်ကြောင့် သင့်ရဲ့ရိုက်ချက်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။
မြင်ကွင်းကျယ် Wide and Ultra Wide Modes ပါဝင်တဲ့အတွက် ရိုက်ချက်တိုင်းက လွဲချော်မှုတွေ မရှိတဲ့အပြင် ပိုမိုအံ့သြဖွယ် Panorama မြင်ကွင်းကျယ်ကိုလည်း ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူ ရိုက်နိုင်တော့မှာပါ။
သင့်စိတ်ကြိုက် ထပ်တူကျစေမဲ့ ကင်မရာ
ကင်မရာရိုက်ချက်တွေနဲ့အတူ လင်းလက်ဖို့အတွက် အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ Galaxy A20ရဲ့ 8MPပါရှိတဲ့ အရှေ့ကင်မရာက Selfie Focus ကိုအသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့နောက်ခံBackground ကို မှုန်ဝါးပေးထားတယ်ဆိုတော့ ရုပ်ပုံတွေတိုင်းအတွက် Star တစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီပေါ့။
သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဖုန်းပေါ်မှာတင်ဘဲ ပြီးဆုံးအောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။ Galaxy A20ရဲ့ 4,000mAh (Typical)ရှိတဲ့ ဘတ်ထရီက စွမ်းအင်မျှဝေတာတွေ ဖုန်းအသုံးပြုမှုတွေကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ်ထရီရဲ့ အားသွင်းဖို့လိုလာရင်လည်း လျင်လျင်မြန်မြန် အားသွင်းနိုင်မှာပါ။
Galaxy A20 gives you personalized protection with face recognition technology. It knows you, so you can simply hold the phone to your face for an easy, secure way to unlock and access. It†s that simple.
*မြင်ကွင်း အရွယ်အစား - ထောင့်ဖြတ်၍ တိုင်းတာပါသည်၊ Galaxy A20 ၏ဖန်သားပြင် (စခရင်) အရွယ်အစားမှာ စတုဂံပုံအပြည့်၌ 6.4" ရှိ၍ ထောင့်ဝိုင်းများပါ ထည့်တွက်ပါက 6.2" ရှိသည်။ ထောင့်ဝိုင်းများနှင့် ကင်မရာ အပေါက်တို့ကြောင့် အမှန်တကယ် မြင်ရသည့် ဧရိယာမှာ ပိုသေးပါသည်။
*ဘက်ထရီ စွမ်းအား (ပုံမှန်အတိုင်း) - ပုံမှန် တန်ဖိုးကို တတိယပါတီ ဓါတ်ခွဲခန်း အခြေအနေအတိုင်း စမ်းသပ်ထားပါသည်။ ပုံမှန် တန်ဖိုးသည် ဘက်ထရီ စွမ်းအား၌ သွေဖယ်မှုကိုထည့်တွက်ထားသော ခန့်မှန်ခြေ ပျမ်းမျှ တန်ဖိုးဖြစ်ပြီး IEC 61960 စံနှုန်းနှင့်အညီ စမ်းသပ်ထားသော ဘက်ထရီ နမူများဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်နှုန်း (အနည်းဆုံး) စွမ်းအားမှာ 3900mAh ဖြစ်သည်။